घर दाँत Whitening | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
पोस्ट ट्याग "घर दाँत whitening,"
कसरी घर प्रयोग विधि दांत दाँत सेतो गर्न
दाँत को एक सुन्दर चमकदार जोडी राख्दा सबैको लागि सपना रूपमा लामो तपाईं थाहा रूपमा छ आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न. तपाईं पनि आफ्नो दाँत एक दाँत दांत किरा वा दन्त चिकित्सा संग brighter र Whiter बनाउन सक्छ. तर, तीमध्ये कुनै पनि निम्न दांत दाँत सामान्य मान्छे को सबै भन्दा खर्च गर्न सक्दैन भनेर पनि उच्च लागत. यसबाहेक, तीमध्ये सधैं सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा इच्छित परिणाम प्रदान गर्छन्. माथि-द-काउन्टर दाँत whitening, किरा र महंगा दन्त सर्जरी अलग्गै, तपाईं थप एक विकल्प आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न भनेर दाग-मुक्त प्राप्त गर्छ, तपाईं कुनै पनि आर्थिक बोझ राख्दै बिना सेतो दाँत मोती. तपाईंलाई थाहा सक्षम हुनेछ प्रयोग गरेर आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न विधि दांत घर दाँत. घर दाँत दांत विधिहरू अक्सर अन्य विधिहरू भन्दा अझ प्रभावकारी काम. कि साथै, घर-आधारित प्रविधी तपाईं पक्कै किन्न सक्छन् कि धेरै सानो खर्च. तल तरिकाहरू छन् आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न एक किफायती लागत मा.
सोडा पाक लगभग हरेक घर को भान्सा मा उपलब्ध छ र मद्दत गर्छ आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न. मानिसहरू Tastemaker रूपमा बेकिंग सोडा प्रयोग. बेकिंग सोडा पनि सफाई उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ. यो रेफ्रिजरेटर देखि पन्जेन्ट गंध हटाउन प्रभावकारी काम गर्दछ. तपाईं आफ्नो दाँत सफाई लागि बेकिंग सोडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. सोडा पाक प्रकृति मा घर्षण छ र यो सुविधा तपाईं आफ्नो दाँत को सबै भन्दा ज्यादा सतह देखि दाग हटाउन मद्दत गर्छ. दाँत whitening, लागि, सोडा को एक चम्चा लिन, पानी केही ड्रप र एक नम नरम-bristled टूथब्रश. आफ्नो पाम मा सोडा लिन र यो एक पेस्ट बनाउन यो पानी को थोपा थप्न. अब पेस्ट मा टूथब्रश डिप र आफ्नो दाँत माझ्छु. तपाईं हरेक हप्ता रूपमा एक पटक धेरै यो विधि पालन गर्न सक्छौं.
त्यहाँ मद्दत केही फल हो आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न; तर स्ट्रबेरी आफ्नो दाँत सेतो गर्न सबै भन्दा राम्रो काम. यो सजिलो मध्ये एक छ, प्रभावकारी र कम खर्चिलो घर दाँत whitening, किरा. स्ट्रबेरी एक सक्रिय संघटक रूपमा malic एसिड समावेश. यो जैविक घटक मा मद्दत गर्छ आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न दाँत को सतह देखि दाग loosen गर्न. सबै भन्दा राम्रो परिणाम लागि, तपाईं स्ट्रबेरी संग बेकिंग सोडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. सानो टुक्रा मा एक मध्यम आकारको पाकेको स्ट्रबेरी कटौती र एक कचौरा मा टुक्रा लिन. त्यसपछि सोडा को आधा चम्चा फल गर्न मिश्रण एक काँटा संग राम्रो तरिकाले मिश्रण गर्न यो एक मुलायम स्थिरता हुन्छ सम्म थप्न र Mash. अब एक टूथब्रश तपाईंको दाँत मा यो मिश्रण लागू र केही मिनेट लागि प्रतीक्षा. त्यसपछि आफ्नो मुख सादा पानी राम्रोसँग कुल्ला. तपाईं हरेक हप्ता मा एक पटक को लागि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ.
यो अर्को राम्रो विकल्प छ आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न घरमा. धेरै घरहरू मा, यो कटौती र तुच्छ खरोंच कीटाणु गर्न प्रयोग गरिन्छ. यो एक उत्कृष्ट दाँत whitener रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. सबैभन्दा महंगा टूथपेस्ट प्रमुख घटक रूपमा पेरोक्साइड समावेश. तपाईं एक mouthwash र पनि दाँत whitener रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. पेरोक्साइड को एक-चौथो कप ले आफ्नो मुख मा र बारेमा एक मिनेट लागि gurgle. त्यसपछि आफ्नो मुख सादा पानी राम्ररी कुल्ला. राम्रो प्रभाव प्राप्त गर्न पेरोक्साइड प्रयोग पछि आफ्नो दाँत माझ्छु. तपाईं सबैभन्दा आषा परिणाम प्राप्त गर्न हरेक दिन मा एक पटक पेरोक्साइड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 4, 2016 10 मा:24 AM
विभाग: सेतो दाँत सुझाव ट्याग: घर दाँत whitening,, आफ्नो दाँत कसरी सेतो गर्न, आफ्नो दाँत सेतो